Wararkii Ugu Danbeeyay qaraxyadii ruxay Kampala &Khasaaraha ka dhashay | Biyoguurenews.com
Home Maqaallo Wararkii Ugu Danbeeyay qaraxyadii ruxay Kampala &Khasaaraha ka dhashay
Bartamaha magaalada Kampala ee caasimada dalka Uganda waxaa ka dhacay labo qarax oo xoogan , waxaana qaraxyadan ka dhashay khasaaro kala duwan sida ay baahiyeen Warbaahinta dalka Uganda.
Qaraxa koobaad ayaa ka dhacay goob laga dukaameesto oo ku dhaw xarunta booliiska magaalada Kampala, qaraxa labaad ayaa isna ka dhacay meel ku dhaw xarunta Baarlamanaka dalka Uganda.
Inta la xaqiijiyay qaraxyadan ka dhacay magaalada Kampala waxaa ku dhintay afar qof oo labo kamid ah yihiin Saraakiil booliis halka ay ku dhaawacmeen dad gaaraya 24-qof, dadka dhaawacmay ayaa afar qof oo kamid ah lasoo sheegayaa in xaalad adag ku jiraan.
Ciidamada booliiska iyo Sirdoonka magaalada Kampala ayaa wada howlgalo baaritaano ah oo ku aadan qaraxan, waxaa sidoo kale la adkeeyay amaanka xarumo kuyaala magaalada Kampala iyada oo laga cabsi qabo in weeraro kale dhacaan.
Qaraxyadan maanta ruxay magaalada Kampala ayaan wali jirin cid sheegatay masuuliyadooda, waxaana qaraxyadan imaanayaa xili dhawaan maqaayad kutaala magalaada Kampala ka dhacay qarax khasaaro dhaliyay.
Previous articleWiilkii Qaddaafi ee u tartamayey madaxtinnimada Libya oo la soo jeediyey ‘in laga joojiyo’
Next article30 sanno danbe gaadhi saarnaan mayne waa in aynu ka dagnaa” Sucaad Carmiye